We Fight We Win. -- " More than Media ": မိတ္တီလာ Crimes Against Humanity
မိတ္တီလာ Crimes Against Humanity
"Those individuals who committed the such heinous crimes must be accountable for the most serious atrocities against human dignity; crimes against humanity. We strongly denounce those individuals who committed the such heinous crimes in Burma"
မင်းတို့ ကောင်တွေကလဲ အတည်ပေါက်နဲ့ CNN တို့MSNBC တို့FOX News တို့ မှာပါတဲ့ အိုဗားမားရဲ့အလုံး ဆို့ပြီး အာဏာလက်ကိုင်ရှိနေတဲ့ ကောင်တွေ အချိုးနဲ့ ဟောက်စားလုပ်ပြန်ပြီ။ မသိရင်တော့ ဟိုက်ရှားလပါး လေးစားဖို့ ကောင်းလိုက်တာတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် အခြေခံအားဖြင့် သဘောတူပါတယ်။ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဘယ်ဘာသာဝင်တွေလုပ်လုပ် ကန့် ကွက် ရမယ် ကာကွယ်ရမယ် ၊ တားဆီးရမယ်။
စောက်မြင်ကပ်တာကတော့ မင်းတို့ တွေကိုယ်မင်းတို့ ကက်ဘိနက်ကြီး ဖင်ခုထိုင်ထားတဲ့ ကောင်တွေ စောက်ချိုးနဲ့ "
"Respect my authoritah" ဆိုတဲ့Eric Cartman from South Park Cartoon series လိုတောင်မဖြစ်ဘူး။
မင်းတို့ က ဗိုလ်ကာတွန်း တွေ ။
မိုးသီး မူဆလင်ပြောင်းလိုက်တာလား ဒါမှမဟုတ် မင်းအမေက မူဆလင်လား။ မင်းကြည့်ရတာ သွေးရိုးသားရိုး တော့မဟုတ်ဘူး။